पेट दुखेर अस्पताल पुगेका बिरामीको भिडियो एक्सरे हेर्दा डाक्टर कै होस उड्यो ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०६, २०७८ समय: १४:२०:२९
काठमाडौं । बिरामी भए अस्पताल पुगेका एक व्यक्तिको शरीरबाट जे कुरा निक्ल्यो त्यसले डाक्टरलाई पनि हैरान बनाएको छ ।भारत, मध्य प्रदेशको सतना जिल्लामा एउटा डरलाग्दो घटना देखा परेको हो । सो कुरा देखेर सबै छक्क परेका हुन् ।
उनले भने कि उनी लगभग दुई बर्षदेखि पेटको दुखाइबाट पीडित छन् । पेटमा दैनिक दुखाइ हुन्छ । उनलाई भोक लाग्दैन र कमजोरी महसुस भइरहन्छ ।’
डा. पालले पहिले कीराहरूलाई मार्न औषधी दिए । औषधीले प्रभाव देखाउने बित्तिकै पेटबाट करीव डेढ फिट लामो गँड्यौला आकारको कीरा पेटबाट निकालियो, जुन जीवित अवस्थामा थियो ।
रीवा श्याम शाह मेडिकल कलेजका डीन डा. मनोज इन्दुलकर भन्छन् कि यो गोलो गँड्यौला जस्तो देखिन्छ ।पेटबाट त्यस्ता गँड्यौलाजस्ता कीराहरु फेला परेको यो नयाँ घटना होइन । हामी तपाईंलाई बताउँन चाहान्छौँ कि पेटमा थुप्रै प्रकारका कीरा फेला परेका छन् । यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ ।
पहिलोलाई गोला वर्म भनिएको छ, जबकि दोस्रोलाई टेप वर्म भनिन्छ । यी दुवै कीराहरूले मानव शरीरलाई असर गर्दछन् । समयमै उपचार पाए त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।